Governemanta – Ceni : mbola hifampidinihana ny tetiandrom-pifidianana | NewsMada
Governemanta – Ceni : mbola hifampidinihana ny tetiandrom-pifidianana
« Ny fikarakarana ny fifidianana miaraka amin’ny Ceni no iraky ny governemanta amin’izao fotoana izao. Tsy maintsy hifampidinihana izay, mba hahatomombana ny enti-manana. Tsy azo hadinoina fa miala any amin’ny kitapom-bolam-panjakana ny ampaham-bola be indrindra hikarakarana ny fifidianana. »
Io ny fanazavan’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, tamin’ny fakan-kevitra ireo firaisamonina sivily sy mpisehatra politika momba ny fanatanterahana ny fifidianana, teny Antaninarenina, omaly. Misy koa ny fanapahan-kevitra politika iarahan’ny maro. Tsy maintsy jeren’ny Ceni izany amin’ny famaritana ny tetiandrom-pifidianana.
Efa vonona amin’ny lafiny teknika ny Ceni
Manao tolo-kevitra momba tetiandrom-pifidianana ny Ceni. Avy eo, tsy maintsy misy ny didim-panjakana manamafy an’izay. Efa vonona amin’ny lafiny teknika ny Ceni. Efa misy ny tetiandro, fa andrasana fotsiny ny fametrahana ny datim-pifidianana amin’izay mahavonona ny rehetra.
Hifameraperana tsara ny fifampiresahana amin’izany, izay fakana antoka ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana hoe tena misy ny fahavononana hiroso amin’ny fifidianana. Amin’izay no hahazoana mamaritra ny tetiandrom-pifidianana. Tsy maintsy ao anatin’izay ny volavalona tetiandrom-pifidianana haroson’ny Ceni.
« Ny sehatra fakan-kevitra ataon’ny Ceni mba hihainoana ny mpiara-miombon’antoka, mety ho tolo-kevitra na fanakianana: raisina avokoa hanatsara ny fomba fiasa », hoy izy.
An’ny mpanao politika ny lafiny politika
Ho an’ny Ceni, miainga amin’ny lalàna manankery ny fanatanterahana ny fifidianana. Efa navoaka ny lalàm-pifidianana. Raha misy tsy mahafa-po ny lalàna manankery, mandeha ihany ny adihevitra eo amin’ny mpanao lalàna na ny parlemantera sy ny mpisehatra politika.
« Any amin’ny mpanao politika ny raharaha politika », hoy ny filohan’ny Ceni, manoloana ny tolo-kevitry ny mpisehatra politika sasany fa tsy tokony mbola hirosoana aloha ny fifidianana. Anjaran’ny mpanao politika no mifanaraka ny amin’izay.